अघोरी बाबाकी श्रीमतीलाई ठुलो चिन्ता, तिहारकै मुखमा दुखलाग्दो खबरले भक्कानीईन – दैनिक नेपाल न्युज
युटुबको ट्रेनिङमा हरेक हप्ता कब्जा गर्दै आएका अघोर बाबाकी श्रीमतीले आफ्नो बास्तबिक पिडा मिडियासामु ल्याएकी छिन । अघोर बाबाको हाँसो सुनेर मख्ख भएका अधिकांशले यो बेला उनको बिबाह भएको खबर सुने पछि अलिक लचिलो भएका छन भने कतिले बिबाह गर्ने बाबाको खुलेरै बिरोध गर्न थालेका छन ।
उनकी श्रीमतीको चरित्रको बारेमा पनि पछिल्लो केहि समय एता औला उठ्न थालेको छ । श्रीमतीको अर्को श्रीमानको बारेमा आएको खबरले अझ दर्शकले बुझ्न खोजिरहेको पाईन्छ । अघोर बाबाको बिहे हुनु यसै पनि गलत हो भन्ने समाचार प्रसस्तै आएको छ । हेरौ बास्तबिकता के थियो? भिडियो नै:
भाइटिका लगाउदा यस्ता कुरा भुल्न हुदैन, के गर्न हुदैन ? भाइटिका यसरी लगाउदा अतिनै उत्तम